जीवनलाई रोमान्टिक बनाउने टिप्स - जीवन शैली - प्रकाशितः भाद्र २४, २०७२ - नारी
जीवनलाई रोमान्टिक बनाउने टिप्स
भाद्र २४, २०७२ जीवन सधैं एकनासको हुँदैन । जीवन भोगाइका क्रममा अनेक आरोह–अवरोह पार गर्नुपर्ने हुन्छ । महिलाले विवाहपछि अर्काको घरलाई आफ्नो बनाएर बस्नुपर्ने हुन्छ । शिशु जन्मिएपछि उसको जिम्मेवारी, परिवारको जिम्मेवारी, आर्थिकस्थिति, नोकरीको चिन्ता आदिमै जीवन बित्छ ।
श्रीमतीको प्यारो हाँसो पनि चिडचिडाहट लाग्न थालेपछि श्रीमान् अफिसबाट ढिलो घर फर्कन सक्छन्। हरेक सम्बन्धमा यस्तो हुन सक्छ । साथी एवं नातेदारको सम्बन्ध पनि उत्तिकै महत्वपूणर््ा हुन्छ । यसले गर्दा पनि जीवनसाथीलाई त्यति समय दिन भ्याइँदैन । आफ्नो रोमान्टिक जीवनमा टकराव उत्पन्न भएको छ ? विवाहको केही दिनमै जीवन कष्टकर लागेको छ वा गृहस्थीमा कुनै किसिमको ठाकठुक परेको छ भने आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई रोमान्टिक बनाउन निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
डिनरको नयाँ ढंग : के सधैं एउटै तरिकाबाट खाना खाने टेबलमा बस्नुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने केही नयाँ प्लान गर्नुपर्छ । शुक्रबार तथा शनिबारको डिनरमा थोरै परिवर्तन गर्नु वेश हुन्छ । सधैं झैं ७–८ बजे नै डिनर खानुपर्छ भन्ने छैन । खाना खाने टेबललाई मैनबत्तीले सजाउनुपर्छ । कहिलेकाहीँ खाने खानालाई पनि सजाउन सकिन्छ । टेबलमा सुगन्धित गुलाबको फूल राख्नु उपयुक्त हुन्छ । धेरै थरिका परिकार बनाउनुपर्छ भन्ने छैन तर आफ्नो पार्टनरलाई विशेष मनपर्ने परिकार भने बनाउनुपर्छ । यसरी दम्पती सँगै बसेर खाँदा केही नयाँपन अनुभव हुनुका साथै आत्मीयता पनि बढ्छ।
आफ्ना लागि केही समय : आमाबुवा नजिकै बस्नुहुन्छ भने उहाँहरूको मद्दत लिनुपर्छ । शिशु सानो छ भने एकदिन उसलाई आमाबुवाको घरमा छोडेर श्रीमान्का साथ एक्लै बस्नुपर्छ । विवाहको दिन लगाएको गाउन लगाएर विवाहको तस्बिर हेरी श्रीमान्सँग बसेर गीत सुन्दै कफी पिउनुको आनन्द अलौकिक हुन्छ । भान्सामा दुवैजना मिलेर खाना बनाउँदा पनि रमाइलो हुन सक्छ । सँगै बसेर रोमान्टिक चलचित्र हेर्न सकिन्छ । यसो गर्दा शिशुलाई आमाबुवाको माया प्राप्त हुन्छ भने आफूलाई पनि घरमा अर्कै वातावरण अनुभव हुन्छ ।
जिम्मेवारी बाँड्नुपर्छ : शिशुको जिम्मेवारी आमाबुवाले समान रूपले बाँड्नुपर्छ । आमा पनि कामकाजी भए त्यसो गर्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । आमाले घरको काम गर्दा शिशु हेर्ने जिम्मेवारी बुवाले लिनुपर्छ । यसो गर्दा महिलाको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ । घरको काममा श्रीमान्ले सघाए महिलामाथि मात्र कामको बोझ पर्दैन । यसो गर्दा सँगै बस्ने, कुरा गर्ने समय पनि मिल्छ ।
स्पर्शको अनुभव गर्नुपर्छ : विवाहको ६–७ वर्षपछि दम्पतीबीचको यौनसम्बन्ध कमजोर हुँदै जान्छ तर त्यसो हुन दिनु हुँदैन । दुवैका बीच रोमान्स ल्याउन यौनसम्पर्क आवश्यक छ । एक–अर्काप्रति प्रेम भाव जगाउनुपर्छ । जीवनसाथीको आलिंगनमा बाँधिदा दिनभरिको थकान पनि कम हुन्छ । कहिलेकाहीँ एक–अर्काको मालिस पनि गरिदिनुपर्छ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार ल्याउन कहिलेकाहीँ एक–अर्कालाई उपहार पनि दिनुपर्छ । उपहार महँगो नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । आफूले दिएको सानो उपहार पनि जीवनसाथीका लागि बहुमूल्य हुन सक्छ ।
बौद्धिक कुराकानी गर्नुपर्छ : श्रीमान्–श्रीमती सँगै बस्दा घरपरिवारका साथै देश–विदेशका कुराकानी पनि गर्नुपर्छ । रोमान्टिक नलागे पनि कहिलेकाहीँ यस्ता कुरा गर्दा सामाजिक सरोकार तथा देशको राजनीतिक अवस्थाका सम्बन्धमा थाहा पाउन सकिन्छ । यसैगरी कला एवं साहित्यका पुस्तक पनि अध्ययन गर्नुपर्छ ।
मर्निङ वाक तथा योग : दिनहुँ पार्क तथा खुला चौरमा जगिङ गर्नुपर्छ । यसले शरीरमा फुर्तीका साथै ताजापन पनि ल्याउँछ । योग गर्दा शरीरलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । योग तथा जगिङ गरेर फर्किएपछि श्रीमान्–श्रीमती सँगै बसेर चिया पिउँदै पत्रिका पढ्नुपर्छ । अफिस जानुअघि यी सबै काम गर्न भ्याइँदैन भने अलि छिटो उठ्नुपर्छ ।
रोमान्सका लागि रोमान्च आवश्यक हुन्छ : कुनै पनि कुरा जिन्दगीमा पहिलोपटक हुन्छ । पहिलोपटक स्कुल जानु, पहिलो प्रेमपत्र लेख्नु, पहिलोपटक डेटिङ जानु यी सबै कुरा सधै सम्झनामा हुन्छ । यसमा केही रोमान्च तथा आत्तिएको जस्तो महसुस हुन्छ । जीवनमा रोमान्सलाई सधै जीवित राख्न यस्तो गर्नुपर्छ जसमा रोमान्च पनि मिसिएको होस् । कुनै नौलो ठाउँमा अर्थात् भीडभाडभन्दा केही पर जानुपर्छ । नयाँ ठाउँमा जाँदा एक–अर्काको हात समाएर हिँड्नुपर्छ । श्रीमान्को जन्मदिनमा पुरानो प्रेमपत्र तथा पहिलोपटक स्टुडियोमा खिचाएको तस्बिर फ्रेममा राखेर उपहार दिनुपर्छ ।
पुस १५, २०७२ - अनलाइन सपिङ टिप्स
भाद्र २९, २०७२ - तीजको लागि पहिरन टिप्स
जेष्ठ ६, २०७२ - समर टिप्स फर हेल्थ
जेष्ठ ६, २०७२ - त्रसित बनाउने अपार्टमेन्ट